Manadino ny « izaho »
A la Bourse du Commerce, François Pinault imprime sa marque sur l’art parisien
Les femmes transgenres autorisées à jouer au rugby féminin en France
France: L’alerte à la bombe dans le centre de Lille levée, pas d’explosifs
L’Irlande soupçonne Londres de vouloir modifier l’accord de Brexit
Il est « trop tôt » pour envisager un 2e plan de relance européen, selon Margrethe Vestager
Covid-19/France: La décrue des patients en soins critiques se poursuit
"Voahombo miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy."- Gal. 2:20.
Nalain'i Paoly ho an'ny tenany tamin'ny alalan'ny finoana ny fahasoavan'i Kristy, ary io fahasoavana io no nanome azy izay nilain'ny fanahiny. Azony tamin'ny alalan'ny finoana ilay fanomezan'ny lanitra ary nozarainy tamin'ireo fanahy izay nangetaheta fahazavana. Izany fanandramana izany no ilaintsika atao koa. Mivavaha mba hanananao izany finoana izany, ary mitoloma ho fihazonana azy. Matokia fa homen'Andriamanitra anao tokoa izany.
Misy asa lehibe tsy maintsy atao eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Tsy tontolo nofinofy tsy akory no eto fa zava-misy tokoa no manoloana antsika. Hita etsy sy eroa ny fanehoan'i Satana ny heriny. Andeha isika hiara-hiasa Aminy Izay manao asa famerenana amin'ny laoniny sy manandratra. Aoka tsy hohadinontsika fa izay miasa ho an'i Kristy dia tsy maintsy manovo hery ao amin'ilay loharanon'ny hery rehetra. Mila tanja-tsaina ny Kristianina, mila fahavononana tsara sy fahalalana avy amin'ny fandinihana ny Tenin'Andriamanitra. Tsy azony atao ny hameno ny sainy amin-javatra tsy misy ilàna azy. Tsy maintsy havaozina isan'andro ny herin'izy ireo ara-panahy.
Mianara amin'llay niteny hoe: "Malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho." Hahazo fanandramana vaovao isan'andro momba ny zava-panahy ianao, ho hitanao isan'andro ny halehiben'ny famonjeny sy ny voninahitry ny firaisana Aminy. Hianatra tsy tapaka ny fomba hananana fiainana mendrika tahaka ny an'i Kristy ianao, ary hitombo hatrany amin'ny fanahafana ny Mpamonjy.
Raha manaiky ho faty ny amin'ny "izaho" isika, ka mahazo an-tsaina tsara ny tokony ho fahalehibiazan'i Kristy eo amin'ny fiainantsika sy ny hasarobidintsika eo imason'i Kristy, raha miray amin'ny fatoran'ny firahalahiana kristianina isika, dia hiasa amin-kery lehibe amin'ny alalantsika Andriamanitra. Ary dia hohamasinina amin'ny alalan'ny fahamarinana isika. Hofidin'Andriamanitra tokoa isika ary hofehezin'ny Fanahiny Masina. Ho sarobidy amintsika ny andro tsirairay satria tombontsoa fanararaotra no handraisantsika izany, mba hampiasantsika ireo fanomezam-pahasoavana nomena antsika ho fanasoavana ny hafa. — RH, 30 May, 1907.
Tsy maintsy manadino ny "izaho" isika eo am-panompoana ny hafa amim-pitiavana. Mety tsy hotsaroantsika ny sasany amin'ireo asa feno hatsaram-panahy ataontsika, fa ny mandrakizay kosa dia haneho mazava tsara ny asa tsirairay natao ho famonjem-panahy sy ny teny tsirairay notononina ho fampaherezana ireo zanak'Andriamanitra; ary ireny asa natao ho an'i Kristy ireny dia anisan'ny hitondra fifaliana ho antsika mandritra ny mandrakizay. — HP, t. 230